MDS ရဲ့ လစဉ်ဒီဇိုင်းသစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ကို‌ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလေး နှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးဖို့ MDS Gift Subscription လေးရှိနေပြီနော်!!
With more than 600 new items to pick every month,
the MDS Subscription is the perfect gift for any occasion.
နှစ်သက်ရာ MDS Solo, Duo, Ensemble Gift Subscription များကို၆လစာထိ ရွေးချယ် လက်ဆောင် ပေးလိုက်ပါ
You can now giftaSolo, Duo or Ensemble MDS Subscription of up to6months.
MDS Subscription လက်ဆောင်ပေးမယ်!
Gift card တစ်ကဒ်တည်းနှင့် MDSဒီဇိုင်း ၆၀၀ကျော်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီနော်
1 card, over 600 possibilities
ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘာလက်ဆောင်ပေးရမလဲမသိဖြစ်နေပါလား? MDS Myanmar Website မှာ စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းလေးတွေရွေးချယ်ရယူနိုင်ဖို့ MDSရဲ့ ၃၀,၀၀၀ကျပ်၊ ၅၀,၀၀၀ကျပ် ၊ ၁၀၀,၀၀၀ကျပ် Gift Card လေးများကိုလက်ဆောင် အဖြစ်ပေးလိုက်ပါ။
Not sure what to gift? Give the gift of choice. Select MDS gift Cards from 30,000 ks, 50,000 ks and 100,000 ks denominations that can be used online.
MDS Gift Card လက်ဆောင်ပေးမယ်!
Gift Subscription ပေးလိုသူများအတွက်
Gift Subscription ဆိုတာဘာလဲ?
မိမိချစ်ရတဲ့သူတွေကို MDS Myanmar ရဲ့ ဘယ်ပစ္စည်းလေး လက်ဆောင်ပေးရမလဲ မသိအောင် အခက်တွေ့နေပါသလား? လက်ဆောင်ရရှိသူ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်ရယူနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို Gift Subscription လို့ခေါ်ပါတယ်။
Gift Subscription အမျိုးအစား ၃မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ Single - (၄၉,၀၀၀ကျပ်) တစ်လလျှင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း တစ်ခု
၂။ Duo - (၈၉,၀၀၀ကျပ်) တစ်လလျှင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း နှစ်ခု
၃။ Ensemble - (၁၆၉,၀၀၀ကျပ်) တစ်လလျှင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်း လေးခု
Subscription အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Online မှာသာမက ဆိုင်များတွင်ပါ နောက်ထပ်ဝယ်ယူမှုတိုင်း အတွက် ၂၀%လျှော့စျေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Gift Subscription ကို အနည်းဆုံး ၆လမှစ၍ မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ရရှိသူက လစဉ် Credit များ ရရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ချစ်တို့က ထို Subscription အတွက် full payment ကိုပေးချေပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
A Gift Subscription isaservice that allows your Giftee greater savings in picking her wardrobe.
There are3Gift Subscription tiers available:
Single - (49,000ks) your choice of 1 itemamonth
Duo - (89,000ks) your choice of2itemsamonth
Ensemble - (169,000ks) your choice of4itemsamonth
All tiers come with 20% off any further purchases online.
You can select one of the tiers for at least6months. Gifter will need to pay the full amount of the subscription upfront, whereas giftee will receive the appropriate number of Credits every month.
Gift Subscription က ဝယ်ယူထားတဲ့ သက်တမ်းကုန်သွားရင် သက်တမ်းထပ်တိုးလို့ ရပါသလား?
Can I extend my Gift Subscription when it expires?
ချစ်အနေနဲ့ လက်ဆောင်ပေးလိုသူအတွက် နောက်တစ်ကြိမ် အစကနေ ပြန်ဝယ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ထိုသူသည် Gift Subscription ၏ နောက်ဆုံးနေ့မှာ ကိုယ်တိုင် ငွေပေးချေပြီး MDS Subscriber အဖြစ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
MDS Subscription အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဤ နေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
No. You will need to re-purchaseaGift Subscription for your Giftee. However, your Giftee has the option to continue her subscription at her own cost by converting to becomeaMDS Subscriber at the end of her Gift Subscription. Click here to learn more about the MDS Subscription.
Gift Subscription ကိုအချိန်ကြာကြာ ပြုလုပ်လို့ရပါသလား?
Can I giftalonger Subscription?
Gift Subscription ကို အနည်းဆုံး ၆လမှစ၍ အများဆုံး ၉လအထိ မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
You can chooseaGift Subscription of at least6months to9months.
ချစ်..ပေးတဲ့ Gift Subscriptionကို တစ်ဖက်လူမှ လက်ခံရရှိပြီးပြီလားဆိုတာ
ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ဘယ်လို စတင်အသုံးပြုရမလဲ?
How do I know if my Gift Subscription has been received and activated?
ချစ်ရဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိသူမှာ Gift Subscription နဲ့ပက်သတ်သော Email ကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Gift Subscription ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Email မှာပါတဲ့ Link မှတဆင့် ဝင်ရောက်ပေးပါ။
Email အကြောင်းကြားစာကို ချစ်လည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Your Giftee will receive an email of the Gift Subscription. At the bottom of the email will bealink to activate the Gift Subscription. You will also receive an email notification.
၀ယ်ယူပြီးနောက် Gift Subscription အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလို့ရပါသလား။
Can I cancel the Gift Subscription after purchase?
ချစ်တို့ ဝယ်ယူထားသော Gift Subscription သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားမှသာ အလိုအလျောက် ရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The Gift Subscription will be automatically cancelled only upon expiry.
Email လိပ်စာ မှားပေးမိလျှင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသလား?
I entered the wrong email address, can I make changes to my gift?
ကျေးဇူးပြု၍ MDS Myanmar ရဲ့ hello.mm@mdscollections.com (သို့မဟုတ်) ဖုန်း 09-799555599 ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
Please contact us at hello.mm@mdscollections.com or 09-799555599.
Gift Subscription လက်ဆောင်ရရှိထားသူများ အတွက်
လက်ဆောင်ရရှိထားတဲ့ Gift Subscription ကို သက်တမ်းကုန်သွားရင် သက်တမ်း ထပ်တိုးလို့ ရပါသလား?
I receivedaGift Subscription. Can I extend my Gift Subscription when it expires?
ချစ်အကောင့်အား Log-In ဝင်ပြီး Manage Subscription အပိုင်းထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Subscription အစီအစဉ် အသစ်ကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။MDS Subscription ကိုအသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
Yes. You may log into your account and go to the Manage Subscription section and chooseanew subscription plan to sign up for. Please refer to our MDS Subscription for more details.ion.
ချစ်ရရှိထားသော Gift Subscription အား အခြားသူထံ လွှဲပြောင်းလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါသလား?
I receivedaGift Subscription but I want to re-gift it, is it transferrable?
No. It's not transferrable.